मेरो घटुवा होइन बढुवा भएको हो : दंगाल - Nepal's Online News
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खोटाङको सचिवमा रामप्रसाद दंगाल मनोनित भएका छन् । नेकपाको नेतृत्व छनौट कार्यदलले पूर्व एमाले अध्यक्ष बवि चाम्लिङलाई नेकपाको जिल्ला सचिव पदमा मनोनित गरेपनि दोहोरो जिम्मेवारीमा नबस्ने भन्दै राजिनामा गरेपछि एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष दंगाललाई पार्टीको जिल्ला कमिटिको बैठकमार्फत सचिव पदमा मनोनित गरेको हो । नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष पूर्व माओवादी केन्द्रका देवान राई (पृथ्वी)ले पाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख चाम्लिङले सचिव पदमा सपथ खाएको भोलिपल्ट राजीनामा दिएपछि जेठ १६ गते बसेको पार्टीको जिल्ला कमिटिको बैठकमार्फत दंगाललाई सचिवमा मनोनित गरिएको हो । नेकपाको अध्यक्षका दाबेदार उपाध्यक्ष दंगाल सचिवमा मनोनित भएपछि प्रभाव न्यूज डटकमले टेलीफोनमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाँई नेकपाको अध्यक्ष बन्ने दौडमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले आएर सचिवमै बस्न तयार हुनुभयो नि ?
नेकपाको अध्यक्ष बन्ने कुरामा म र पूर्व एमालेको सिङ्गो कमिटि नै लागेको हो । तत्कालिन नेकपा एमालेले खोटाङ जिल्लामा अध्यक्ष पद पाउँनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिल्ला कमिटिको सामुहिक निर्णय थियो । हामीले सचिव पदको दावी गरेका थिएनौँ । किनभने, तत्कालिन अवस्थामा हामीले सचिव पद दावी गर्ने भन्ने थिएन । अध्यक्ष पद नै दावी गरेका थियौं । तर, मुलुकभरी नै यो पार्टी एकता मिलाउनु पर्ने भएकोले र विभिन्न कारणले पूर्व नेकपा एमालेको भागमा अध्यक्ष पद पर्न सकेन । तत्कालिन नेकपा एमालेको भागमा सचिव पद पर्‍यो । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको भागमा जुन पदको भाग पर्छ त्यो स्वीकार्न हामी तयार थियौँ । केन्द्रमा बनेको नीतिले पूर्व माओवादीको भागमा अध्यक्ष पद पर्‍यो नेतृत्वको जिम्मेवारी त्यही अनुशार बाँडियो ।
तर, सचिव पद त अध्यक्षको हैसियतले ववि चाम्लीङले पाउनु भएको थियो, तपाई कसरी आउनु भयो ?
खासगरि, सुरुमै केन्द्रले स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका र कार्यकारी पदमा बस्नु्भएका नेतागणलाई पार्टीगत जिम्मेवारी नदिने भन्ने निर्णय गरेको थियो । धेरैजसो छलफल भएर मिलाउनका लागि जुन–जुन कार्यकारी पदमा भएपनि हाललाई तत्कालिन अध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने यो नीतिगत निर्णय भएको थियो । ववि कमरेडले सुरुमै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भईसकेपछि र पार्टीको एक नम्बर प्रदेश कमिटि सदस्य भईसकेपछि उहाँले आफु माथिल्लो कमिटिमा जाने र हिजो विगतमा पूर्व नेकपा एमाले पार्टीको अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको व्यक्ति सचिव पदमा बस्दिन भन्ने ईच्छा थियो उहाँको ।
त्यतिमात्र होईन उहाँलाई कार्यभार पनि त धेरै भयो, धेरै कार्यभार सम्हाल्दा समयले पनि पुग्दैन् । त्यसकारण बवि कमरेडले एउटा उद्धारता मनैबाट देखाउँनु भयो । उहाँलाई उहाँको जीवनमा पदको लोभ पनि रहेनछ भन्ने पनि त देखियो । उहाँले सिकाएको र देखाएको बाटोमा हामीले हिड्न जरुर छ । तर, पार्टीको नीतिको कारणले गर्दा उहाँले पदमा बस्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो र हामी बीचमा सल्लाह नै भएको थियो पार्टीको केन्द्रको नीतिलाई पनि स्वीकार गर्ने र एउटा सृजनात्मक ढंगले उहाँले पद छोड्ने ।
ववि कमरेड आफै पार्टीका विभिन्न नेताकोमा गएर मलाई बरियताका आधारमा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो त्यो वेला । तर अध्यक्ष पद पाउनु भएन । त्यसपछि हामी दुई बीचमा पनि सल्लाह थियो । तदअनरुप उहाँले सचिव पद पाएपछि सपथ पनि लिनुभयो, पार्टी जिल्ला कार्य समितिको एउटा बैठक पनि चलाउनुभयो र त्यसपछि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो । हाम्रो कार्यालयको बैठकले हिजो पूर्व एमालेको उपाध्यक्ष अहिलेको नेकपाको बरिष्ठ सदस्य भएको नाताले तत्कालिन नेकपा एमालेको भागमा परेको सचिव पदमा मलाई सर्वसम्मतरुपमा निर्णय गरियो, त्यहि अनुशार मैले सचिव पद सम्हालेको हो ।
पूर्व एमालेको उपाध्यक्ष बनिसकेको अवस्थामा सचिवमा बस्न कसरी तयार हुनुभयो ?
पूर्व नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष एमालेको बरियातमा दोस्रो व्यक्ति र अहिले पनि नेकपाको दोस्रो व्यक्ति नै हो म खोटाङमा । यसमा के फरक छ र ? हिजो हामी एउटा पार्टी थियौं । आज ठुला–ठुला दुईवटा पार्टी मिलेर दक्षिण एसियाकै ठुलो पार्टी नेकपा बनेको छ । यो पार्टीलाई सृजनात्मक ढंगले अगाढी बढाउने कुरा हो अव । पार्टीभित्र रहेर ईमान्दारपूर्वक काम गर्ने कुरा हो । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी त कहिले तल कहिले माथी हुनु स्वभाविक कुरा हो । हिजोको कुरासँग यो कुरा तुलना हुँदैन । हिजो नेकपाको म उपाध्यक्ष होईन एमालेको थिएँ, अहिले नेकपाको सचिव भएँ । त्यसकारणले हिजो उपाध्यक्ष भएको र अहिले सचिव भएको हुनाले के तल्लो पोष्ट के माथिल्लो पोष्ट भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी ईमान्दारसाथ पूरा गर्नतर्फ लाग्ने कुरा हो । त्यस कारणले पहिलेको कुरामा अव अहिलेको कुरालाई जोडेर हेर्न मिल्दैन ।
आगामी दिनमा पार्टीलाई तपाईको योगदान के रहन्छ ?
पार्टीभित्र हिजो हामी एमालेमा थियौं । आज दुई वटा पार्टी मिलेर एउटा ठुलो पार्टी बनेको छ । दुई फरक कार्यनीति अख्तियार गरेर आएका दुई वटा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई मिलाएर लैजानु पर्ने त छँदैछ । तल–तल कार्यकर्ताकोबीचमा एकता गर्नुपर्ने त्यसपछि भावनात्करुपमा एक हुनुपर्ने, अझै अधिवेशन, महाधिबेशनहरुमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने, नीतिका सन्दर्भमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने त केही चुनौतीहरु छँदै छन्, यी सवै चुनौतीको सामना गरेर एउटा समृद्ध पार्टी र अव २० वर्षसम्ममा यो मुलुकलाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा अभियानमा एकतावद्ध भएर पार्टीलाई लाने जुन चुनौती छ त्यसलाई सहजतापूर्वक यो कार्यभारलाई पूरा गरेर आगामी दिनमा खोटाङमा अझ सशक्त बनाउँदै जानुछ, हामी दुई तिहाई बहुमतको नजिक छौं, दश वटै स्थानीय तहको आउँने निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउँदै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर यो मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउँने सपना छ । त्यसलाई पूरा गर्नका निम्ति पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर हिजो हामीबीचमा भएका साना–तिना मतभेदका कुरालाई निमिट्यान्न गर्दै सवैको मनलाई एक ठाउँमा बनाएर एकाकार गर्दै अगाडी बढ्नु पर्नेछ ।
यस्ता चुनौतीहरुलाई नेतृत्वले अत्यन्तै ध्यान पुर्‍याएर अध्यक्ष ज्यू, कार्यालयका नेतागणसँग बसेर स्थानीय तहललाई पनि जनतासँग प्रभावकारी काम गर्न लगाउने, चुनावपछि पार्टीका गतिविधिहरु अलिक कम भएका छन्, पार्टी विघटनको कारणले गर्दा तल्लो तहमा एकिकरण प्रकृया ढिलै भएपनि लगभग सम्पन्न गरेका छौँ । विधिका आधारमा नीतिका आधारमा अव पार्टीलाई चलाउँछौं, त्यतिमात्र होईन सवैसँग सहकार्य गर्दै, सवै राजनीतिक दलसँग पनि सहकार्य गरेर खोटाङलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हामी जरुर लाग्छौँ ।
पार्टीभित्रको समीकरणलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
समीकरण त मिलि नै सकेको छ । अहिले तत्कालिन माओवादी केन्द्रले नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष पाएको छ । तत्कालिन एमालेले सचिव पद प्राप्त गरेको छ । हामीले स्थानीय तहमा सवै मिलाई सकेका छौँ । अव त पार्टी एकिकरण भयो, भागबण्डासँगै अव तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादी भन्ने पनि सकियो, अव हामी नेकपाका नेता कार्यकर्ता भयौँ । अव हामीले तोकिएको मितिभित्र तल्ला तहका अधिबेसनहरु सक्छौँ, जिल्ला अधिबेसन सक्छौँ, राष्ट्रिय महाधिबेशन सक्छौँ, नीतिगतरुपमा पार्टीलाई अव्वल बनाएर अगाडि लिएर जान्छौं ।
संगठनको क्षेत्रमा एकतावद्ध बनाएर जान्छौं, सानातिना केही समस्याहरु भए अन्तक्रिया गर्छौ, छलफल गर्छौँ र समृद्ध पार्टी बनाएर अगाडि बढ्छौं । यसमा पार्टीको एकतामा शंका गर्नुपर्ने केही समस्या नै छैन । नीति सिद्धान्तको बारेमा हामी बहस गर्छौं, हिजो तत्कालिन नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगिकार गरेको थियो । माओवादीले २१ औं सताव्दीको जनवादलाई स्वीकार गरेको थियो । अव हामी सिद्धान्तमा बहस गर्छौ, ती सिद्धान्तलाई टुङ्गो लगाईसकेपछि हामी नेतृत्वको सन्दर्भमाका विषयमा पनि सहमति बनाएर जान्छौं ।
यस प्रभाव न्यूज डटकममार्फत आमखोटाङे नागरिकलाई अझ के सुनाउँ भने, अहिलेसम्म खोटाङमा पूर्व नेकपा एमालेले कुनै पनि तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेको छैन्, सहमतिबाट नै नेतृत्वको छनौट गरेको छ, र भोलीका दिनमा पनि नेकपाको नेतृत्व सहमतिकै साथ तलदेखि माथिसम्म नै हिजोको विरासतलाई ध्यान दिँदै निरन्तरता दिईने प्रयन्त गर्नेछौं । र, त्यहि आधारमा अघि बढ्नेछौं ।